सांसद विष्टले सोझै गोर्खाल्याण्ड किन भन्न सकेका छैनन: विनय - Ujyaalo TImes - Same Vision, Different Angles
सांसद विष्टले सोझै गोर्खाल्याण्ड किन भन्न सकेका छैनन: विनय
२०७६ मङ्सिर १२ गते बिहिवार
दार्जीलिङ । गोर्खाल्याण्डको माग गर्छु भनेर सांसद राजु विष्टले सोझै किन गोर्खाल्याण्ड भन्न सकिरहेका छैनन् ? उनले भनेको स्थायी राजनैतिक समाधान गोर्खाल्याण्ड नभएर अरू कुनै बङ्गालभित्रकै व्यवस्था नै हो ? यो कुरा सासंदले स्पष्ट पारून्। हिमालय दर्पणमा समाचार छ ।
बुधवार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेटेर सांसद राजु विष्टले दिएको ज्ञापन पछि गोजमुमो अध्यक्ष विनय तामाङले यसरि प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्। उनले अघि बताएका छन्, कुनै अरू व्यवस्था हैन तर सांद राजु विष्टले गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई सदनमा उठाउनुपर्ने हो। किनभने उनले पहाड़बाट पाएको जनमत गोर्खाल्याण्डको निम्ति थियो। कुनै अन्य व्यवस्थाको निम्ति पहाड़वासीले उनलाई भोट दिएका होइनन्। तर आज आएर सांसदले सोझै गोर्खाल्याण्ड नभनेर घुमाउरो कुरा गरिरहेका छन्।
यसमा ठूलो रहस्य छ जसको पर्दाफास हामी निकट भविष्यमै गर्नेछौ भनी दावी गरेका छन्। तामाङअनुसार वास्तवमा भाजपा गोर्खाहरूप्रति एक प्रतिशत पनि इमानदार छैन। यदि इमान्दार भएको भए जम्मू-काश्मीर अनि हालै विदर्भको सन्दर्भ उठ्दा गोर्खाल्याण्डको एक शब्द पनि किन उठेनन्रु भनी प्रश्‍न गरेका छन्। उनको भनाइअनुसार सासंद राजु विष्ट भाजपाका एजेन्ट हुन्।
सासंदमार्फत् भाजपा पहाडमा हुने आगामी चुनावी मैदानमा उत्रिन चाहन्छ। यदि यो कुरा सही होइन भने उनले सदनमा गोर्खाल्याण्डको मुद्दा उठाएर आफ्नो इमान्दारिता प्रमाणित गरून्।